Ixabiso eliphantsi labanikezeli beplank Kwikstage kunye neFektri | Ukukhawuleza
Umgangatho ophezulu we-Ringlcok Scaffolding Diagona ...
SGS / ANSI / CE Certified High Umgangatho Building Materia ...
I-ANSI / AS / i-SGS / i-DIP eQinisekisiweyo yokuHanjiswa kwesandi ...
Igama lemveliso: Kwikstage PlankPlace of Origin: China (Mainland) Material: Q235Surface: HDGStandard: On RequestProcessing Step: Material → Cutting → Punching → Automatic Welding → HDG → Polishing → Packing → Loading → ScaffoldingPayment: TT-30% in advance; Intsalela Iipesenti ezingama-70 ngaphambi kokuthunyelwa; L / C-100% engenakuguqulwa ...
Igama lemveliso: Iplanga yeKwikstage
Iqhubekekisa Inyathelo: Material → Cutting → Ukubetha ngenqindi → Zenzekelayo Welding → HDG → ipolishi → Ukupakisha → Kulayishwa → banikwe
Intlawulo: TT-30% kwangaphambili; Intsalela-70% phambi ngolwandle; L / C-100% engenakuguqulwa emva kokubona; TT + L / C -TT kwangaphambili, ibhalansi L / C.
Iinkcukacha zokuhambisa: Kwiintsuku ezingama-30-45 emva kokufumana ukubhatala kwangaphambili.
Egqithileyo ILeger ye Kwikstage
Okulandelayo: Umgangatho we Kwikstage
Rapid Scaffolding yinkampani encedisayo yeXishan No.3 Construction Industrial Co, Ltd (无锡 市 锡山 三 建 实业 有限公司). Ishishini layo libhekisa kunqabiso kunye noyilo lwefomwork, ukuvelisa, ukurenta kunye nekhontrakthi.
2. Yasekwa nini i-Rapid Scaffolding?
3. Ifumaneka phi i-Rapid Scaffolding?
I-Rapid Scaffolding ibekwe eWuxi, enendawo entle apho imizuzu engama-30 ukusuka eShanghai ngololiwe kunye neyure enye ngemoto, ikwayi-100km ukusuka eShanghai Port. I-107 107 West West Xigang Road, iSithili seXishan, isiXeko saseWuxi, kwiPhondo laseJiangsu, China.
4 inkulu kangakanani ivenkile yomsebenzi?
Igubungela i-100,000 yeemitha zesikwere, apho indawo yokwakha igubungela i-15,000 yeemitha zesikwere
5. Ngaba i-Rapid Scaffolding inelungelo elizimeleyo lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle?
6.Ngakanani ubungakanani bemveliso yonyaka ekhawulezileyo yokuBelekisa abasebenzi?
25,000T / ngonyaka
7. Ungaqhagamshelana njani ne-Rapid Scaffolding?
Ungathumela i-imeyile ku sales@rapid-scaffold.com okanye utsalele + 86-510-83796833 ngqo.
8.Xa ndingayifumana ikowuteshini emva kophando?
9.What ixesha lokuhambisa?
Ngokubanzi, kwiintsuku ezingama-30-45 emva kokufumana ukuhlawulwa kwangaphambili.
10.Can Rapid banikwe ukunika iisampulu?
Ewe. Ukuba isampulu iqhelekile kwaye ngobuncinane bayo isimahla. Ukuba isampulu ayiqhelekanga kwaye kwiindidi ezahlukeneyo, iya kuhlawuliswa.
11.Yintoni inkqubo yolawulo lomgangatho?
Ngokukhawuleza banikwe isiqinisekiso umgangatho ISO ngamazwe
12.Ngaba uyilo olukhawulezileyo lwabasebenzi kunye nokuphuhlisa iimveliso ezintsha?
Ukukhawulezisa ukunikezela ngokukhawuleza kuyazidla ngokunika iqela lobuchwephesha kunye namava obuchwephesha. Banokuyila kwaye benze iimveliso ezintsha ngokwezicelo zakho.
13.Yintoni inyango yomphezulu wokunikezelwa?
HDG, EP, PC kunye nepeyinti.
14. Ithini iZinc ratio?
I-8% yeplanga, i-6% yombhobho 3.0-4.0mm, 7% ye-2.3-3.0mm.
15.Uyigcina njani i-scaffolding?
Kwinqanaba lokugqitywa kwe-EP, iPC kunye nepeyinti, kuyacetyiswa ukuba kugcinwe kwigumbi elingena umoya nelomileyo. Yokunikezela ngefreyimu eyi-HDG, akukho mfuno zithile.
Ixesha elide kangakanani iimveliso zakho?
Ubomi beemveliso zentsimbi ezishushu ezishushu zi malunga neminyaka eli-10 ukuya kweli-15, kuxhomekeke kwimeko ethile.
17. Uyintoni umahluko kwinkqubo yeRinglock kunye neOctagonlock?
Imilo: Iriski yediski kunye ne-Octagon disk. 2) Izinto: I-disk yediski icinezelwe, ngelixa i-Octagon disk yenziwe. I-3) I-wedge: I-ringlock wedge icinezelwe ngelixa i-Octagonlock yenziwe. 4) I-Spigot: I-Ringlock isebenzisa i-spigot ngelixa i-Octagonlock isebenzisa ikhola 5) I-Ringlock isebenzisa ikhola yesiseko ngelixa i-Octagonlock ingenayo